အခမဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ - Reward Foundation - ကျောင်းသင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောချဉ်းကပ်မှုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုအာရုံစိုက်စေသည်။ တော်ဝင်ကောလိပ်၏အထွေထွေရောဂါကုဆရာ ၀ န်များကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တန်းဆရာများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ ဦး နှောက်အပေါ်ညစ်ညမ်းမှုရဲ့သက်ရောက်မှုအကြောင်းအသေးစိတ်သိချင်ရင်၊Porn on Brain - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်စွဲစွဲလမ်းမှုသိပ္ပံပညာ"ဂယ်ရီ Wilson ကအားဖြင့်။ အသေးစိတ်သိလိုပါကညာဘက်ရှိဘေးဘားကိုကြည့်ပါ။
အသက်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ကလေးသူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအခမဲ့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ပိတ်ဆို့မှုများထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှ၎င်း၏သင်ခန်းစာ (၇) ခုကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်အောင်ကျောင်းမှအခွင့်မသာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သင်လှုံ့ဆော်ခံရသည်ဟုခံစားရပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းသို့လှူဒါန်းရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ညာဘက်ရှိ“ Donate” ခလုတ်ကိုကြည့်ပါ။
မည်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမဆိုသင်ခန်းစာတွင်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီ၏အကြောင်းအရာများကိုစစ်ဆေးရန် bundles စာမျက်နှာသို့သွားပြီးသင်၏တိုင်းပြည်အတွက် super bundles ၏ပုံကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ဝေမှုများမှသင်ခန်းစာများ၊ ဗြိတိန်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်များနှင့်စကော့တလန်တို့၏ဥပဒေများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာရှိသည်။
သင်ခန်းစာများကို မြှင့်တင်နိုင်စေရန် သင်၏ အကြံပြုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်သက်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်- info@rewardfoundation.org။
Re: Sexting, ဥပဒေနှင့်သင်: ဒါဟာအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကဇာတ်လမ်းတွေကိုကြိုက်တယ်၊ ဒီအကြောင်းအရာတွေကများစွာသောဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့အလေးအနက်စဉ်းစားရမည့်တရား ၀ င်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားများက sexting / ဓာတ်ပုံများကို“ အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာ” အဖြစ်လက်ခံရန်အလွန်အဆင့်မမီတော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ဟာအဲဒါကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြတာမို့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး ကျနော်တို့အတော်လေးအံ့သြစရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Edinburgh စိန့်သြဂတ်စတင်း RC ကျောင်းမှဆရာ ၃ ဦး မှ။
သင်၏ကျောင်းသားများအားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်ခန္ဓာယုံကြည်မှု၊ ဆက်ဆံရေး၊ အောင်မြင်မှု၊ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းဘ ၀ အတွက်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ရေရှည်အန္တရာယ်များကိုခံနိုင်ရည်တည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အထုပ်ကိုကြည့်ပါ ဆုလာဘ်ဖောင်ဒေးရှင်းသင်ခန်းစာများအားလုံးမှလည်းအခမဲ့ရနိုင်သည် TES.com.
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ခန်းစာသည်ဤဘာသာရပ်နယ်ပယ်၏ကွဲပြားသော်လည်းအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိသောကဏ္ aspects ၄ ခုကိုပေးသည်။ ကျောင်းသားများသည်ဤခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပျော်စရာ၊ အပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်လုံခြုံသောနေရာတွင်ဆွေးနွေးရန်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ထပ်မံပံ့ပိုးမှုအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုဆိုင်းဘုတ်များ သုံး၍ ဤအကြောင်းအရာကိုဝေဖန်စဉ်းစားရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစိန်ခေါ်မှုပြissueနာ၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များကိုလွှမ်းခြုံရန်အတွက်ဒီဘာသာရပ်distinctရိယာ၌ကွဲပြားသော်လည်းအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောသင်ခန်းစာ ၃ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးပါသည်။ အားလုံးအထက်တွင်၎င်းသည်ကျောင်းသားများကိုသူတို့၏စိတ်ကူး၊ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိပလတ်စတစ် ဦး နှောက်၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဘ ၀ တွင်အောင်မြင်မှုရရန်မည်သို့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုရမည်ကိုသင်ကြားပေးသည် -
Sexting, အပြာစာပေနှင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်
သင်ခန်းစာများကိုကြည့်ပါ ဆုလာဘ်ဖောင်ဒေးရှင်းသင်ခန်းစာများအားလုံးမှလည်းအခမဲ့ရနိုင်သည် TES.com.
အားလုံး 35 ရလဒ်များကိုဖေါ်ပြသည်
default sortingလူကြိုက်များစီပျှမ်းမျှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်စီနောက်ဆုံးပေါ်စီစျေးနှုန်းအားဖြင့်စီ: မြင့်မြင့်နိမ့်စျေးနှုန်းအားဖြင့်စီ: အနိမ့်မြင့်
ဝေလနယ် (Internet Pornography and Sexting Bundle)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေစုစည်းမှု၊ အင်္ဂလန်၊ ဝေလနယ်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်ထုတ်ဝေမှု
Sexting မှနိဒါန်း, အမေရိကန် Edition ကို
Sexting မှနိဒါန်း, စကော့ Edition ကို
အချစ်၊ ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်ဆက်ဆံရေး၊ အမေရိကန်စာစောင်
အချစ်၊ ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်ဆက်ဆံရေး၊ စကော့တလန်ထုတ်ဝေမှု
စမ်းသပ်မှုအပေါ်အပြာစာပေ, အမေရိကန် Edition ကို
စမ်းသပ်မှုအပေါ်အပြာစာပေ, စကော့တလန် Edition ကို
Sexting Bundle ကိုအင်္ဂလန်
Sexting Bundle ကိုစကော့တလန်
Sexting Bundle ကိုဝေလနယ်
Sexting အစုအဝေး, အမေရိကန် Edition ကို
Sexting အစုအဝေး, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Edition ကို
Sexting, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်, အမေရိကန် Edition ကို
The Great Porn စမ်းသပ်မှု၊
The Great Porn စမ်းသပ်မှု၊ စကော့တလန်ထုတ်ဝေမှု